Tsararan-tsaratsara Chinaina 2020 Fararano, orinasa mpanafatra sy manondrana any Chine sy ny mpamatsy | Huaihai Holding Group
Frame: Ampiasao ny vondron-jiro mifampitohy mampandeha ny fandefasana ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fantsom-pandrindrana fantsona, hampihenana ny hantsana eo anelanelan'ny lasantsy sy ny lasantsy eo anelanelan'ny fantsona, hialana amin'ny fifantohana amin'ny fihenjanana, ny tanjaka avo ary ny krizy indostrialy mafy amin'ny lasantsy mandritra ny fanariana;
Andao ampahafantarintsika avy amin'ny ampahany aloha. Ankehitriny isika dia afaka mahita ny harona eo alohan'ny lalana, ny bara vy izay mivelatra toa ny tarehiko be dia be endrika matevina. Azonao atao ny mametraka ny kitapo na satroka ao, tena mety. Manaraka izany ny fantsom-baravarankely, misy mpamatsy roa ambony efatra ho azy isika, ny diam-bony dia φ27mm, hidraulana, ataonay misy solika hidiran'ny hydraulic, izay manome fampandehanana faran'izay manaitra ny fahatafintohinana, mahatonga anao mampifaly na dia amin'ny toe-javatra ratsy aza. Ianao koa dia afaka mahita ny appreace, tena malama sy mamirapiratra, mampiseho ny fenitra avo lenta ho an'ny ampahany. Izany no lohan-doha sy fahazavana mihodina, samy manana azy daholoFanamarinana EEC. Ny haben'ny fametrahana dia mifanaraka amin'ny takian'nyEEC. Ity ny latabatra zavamaneno, afaka mahita fiasa marobe amin'ity trozona ity isika. Voalohany dia manana fitaovam-piadiana 2 izy ity, indreto ny bokotra hisafidianana fitaovam-pandehanana Forward na fitaovana Reverse. Ary ho an'ny paikady Forward, misy karazana 3 hafainganam-pandeha hafa namboarina, eto ny bokotra nisafidianana ny hafainganam-pandeha ambony, antonony na ambany. Ary raha mampiasa fitaovam-piadiana mifamadika isika dia hisy fanairana mba hampitandremana ireo mpandeha ao aoriana. Azontsika atao ny mahita ny mombamomba ny hafainganam-pandeha amin'ny metatra LED, maneho koa ny fampahalalana momba ny bateria, fampahalalana maivana, ny hafainganam-pandehan'ny hafa ary ny fampahalalana tanteraka. Ao fa asehoko anao.
Ankehitriny dia mirona amin'ny seza isika, araka ny voalazako teo aloha, ny hodi-poko sy ny lamosina dia ny ergonomika kokoa, ny lamosina Thickened ary seza kodiarana miaraka amin'ny familiana mahafinaritra. Ny halaviran'ny mpamily miaraka amina toerana fanairana amin'ny seza, afaka mampahatsiahy ny vahoaka hamadika ny fahefana izy io rehefa nidina ny fiara, miantoka ny fiarovana ny mpamily sy ny hafa. Eo ambanin'ny seza dia ny bateria ary ny bateria dia 60V ary 32 AH manome ny halavam-potoana 50km. Andao hojerentsika ny fitaovam-piadiana, mampiasa fantsona mampatanjaka iray mampitony isika, izay tena matevina ary matanjaka. Hitanao fa mamolavola ny faritra tsirairay isika amin'ny fiheverana ny fiainan'ny olonaFair Fair Online
Ndao hifindra amin'ny fipetrahan'ny mpandeha, lehibe noho ny seza misy ny mpamily ary mety amin'ny vehivavy sy ny zaza iray. Eto misy fisainana famolavolana izany, avelao hasehoko anao aho, aforio io seza io, andao atsangano ny cushion ary hamoha izany, avy eo lasa lisitry ny bisikileta, tena milay, tsy marina? Izany no lafin-tsokosoko lehibe amin'ity fiara ity, safidy roa ny safidy roa, handoa vola ho an'ny fiara iray, fa mahazo fiara roa. Tsy hisy handà izany, sa tsy izany? Canton Fair 2020
Ny ampahany farany dia ny fampiatoana aoriana, ny firafitra dia ny fahatsiarovana ny lohataona, manome fiakanana mahafinaritra. Ny famaky any aoriana dia natao ho antsika, isika no misafidy ny mpamatsy ambony amin'ny marika tavela ho an'ny ampinga, mba ho voafehy tsara ny kalitao.
Ankehitriny dia efa saika vita ny fampidirana an'ity modely ity, anjaranao ny fotoana malalaka, anjaranao ny milaza aminay ny fanontanianao sy ny zavatra takinao, avy eo sy ny gary mpanampy anao no hamaly anao ara-potoana.
Nahazo fahaizanaFoara Kantone faha-127
Salama daholo, tonga amin'ny farany izy ity. Solika elektrikano vokatra asongadinay indrindra, manana traikefa manankarena amin'ny R&D sy ny famokarana izahay, ary efa nanondrana azy ireo ho any amin'ny firenena mihoatra ny 86 eran'izao tontolo izao. Raha tianao ny vokatra eto dia aza misalasala mampifandray anay, alefaso eto ny contact, ny mpiara-miasa aminay hifandray aminao ary handefa anao antsipirihany bebe kokoa.